सुचना/प्रबिधि – Page5– rastriyakhabar.com
बुढानिलकण्ठ नगरपालिका ११ नम्बर वडाले संचारकर्मीहरुको कोरोना बिमा गर्ने
काठमाडौं । बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको ११ नम्बर वडाले संचारकर्मीहरुको कोरोना बिमा गर्ने भएको छ । महामारीको रुपमा बढ्दै गएको कोरोना भाइरस संक्रमणको अग्रमोर्चामा रहेर जनतालाई सूचना प्रदान गरिरहेका संचारकर्मीहरुको कोरोना बिमा हुने भएको हो । कोरोना प्रकोप नियन्त्रण तथा रोकथाम अभियानको अग्र मोर्चामा..
काठमाडौं / यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म वर्ल्डलिंकले आफ्ना सबै ग्राहकलाई आईपीभी सिक्समा लैजाने भएको छ । ग्राहकमाझ गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ कम्पनीले आफ्नो योजना सार्वजनिक गरेको हो । एकअर्कासँग सम्पर्क स्थापित गर्न इन्टरनेटमा जोडिएका हरेक उपकरणलाई एउटा आईपी एड्रेस आवश्यक..
काठमाडाैं । वाग्मती प्रदेश सरकारले रेडियो तथा टेलिभिजनको दर्ता नवीकरणबापतको शुल्कमा छुट दिने तथा जरिवाना एवं थप शुल्कसमेत छुट दिने निर्णय गरेको छ । कोरोना कहरका कारण भएको लकडाउनले थलिएका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमका हितका लागि राहतस्वरुप सरकारका तर्फबाट उक्त निर्णय गरिएको प्रदेशका अन्तरिक मामिला..
काठमाडौं । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले श्रमजिवी ऐन विपरित कर्मचारी र पत्रकारलाई जागिरबाट निकाल्ने सञ्चारगृहलाई कानून अनुसार कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको सुरक्षाको असहज र जोखिमयुक्त अवस्थामा अहोरात्र खटेर सूचना प्रवाह गर्ने श्रमजिवी पत्रकार र..
नेपालगन्ज । मुलुकमा बढ्दो किर्ते हस्ताक्षर गरी रकम हिनामिना गरेको र बहुविवाहको घटना रोक्न अब राष्ट्रिय अनलाइन पत्रकार संघ प्रदेश नं. ५ ले सक्रिय भूमिका खेल्ने भएको छ । राष्ट्रिय अनलाइन पत्रकार संघ प्रदेश नं. ५ को मंगलबार बसेको बिशेष बैठकले किर्ते हस्ताक्षर र बहुविवाहको बिरूद्द प्रमाण जुटाई..
शुक्रबार, साउन २, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सरकारले सञ्चार माध्यम नवीकरण शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सञ्चार माध्यमको नवीरण शूल्कमा छुट दिने निर्णय पनि भएको जानकारी दिए । कोभिड–१९ का कारण समस्यामा परेका सञ्चार माध्यमलाई सहुलियत दिन..
अनलाइन सञ्चारमाध्यमको गुणस्तर मापन गर्नुपर्छ : मन्त्री खतिवडा
काठमाडौं । अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको गुणस्तर मापनका लागि छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन् । अहिले प्रतिदिन एकवटा अनलाइन पत्रिका दर्ता हुने गरेको तथ्यांकले गुणस्तरभन्दा संख्या मात्रै वृद्धि हुने भन्दै खतिवडाले यो विषयमा छलफल आवश्यक रहेको बताए ।..
काठमाडौं । भारतीय न्युज च्यानल नेपालमा बन्द भएका छन् । विदेशी च्यानल वितरक मल्टी सिस्टम अपरेटर (एमएसओ)हरुले भारतीय न्युज च्यानलहरुको प्रसारण नेपालमा बन्द गरेका जनाएका छन् । बिहीबार बेलुकीदेखि भारतको सरकारी दूरदर्शनबाहेकका सबै न्युज च्यानल बन्द भएका मेगाम्याक्स टिभीका उपाध्यक्ष ध्रुव शर्माले..
काठमाडौं । पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टीको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले शुक्रबार राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागु गर्नुपर्ने, पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग गर्दै महासंघले प्रदर्शन गरेको हो । लकडाउनको अवधिमा श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई जागिर बाट निकाल्ने,..
‘सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा तीव्र गतिको इन्टनेटर उलपब्ध गराउ’
काठमाडौं । सबै स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालयहरुमा इन्टरनेट सुविधा छिटो उपलब्ध गराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको शुक्रबारको बैठकले सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालय र सरकारी स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्थाहरुमा दु्रत गतिको..
काठमाण्डौ । युनिर्भसल पीस फेडेरेसन नेपाल (युपीएफ)ले विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइसरले सत्य तथ्य खबर सम्प्रेषणका लागी फिल्डमा खटिने पत्रकारहरुका लागी आवश्यक पर्ने सुरक्षा सामग्री मास्क राष्ट्रिय अनलाईन पत्रकार संघलाई हस्तान्तरण गरेको छ । युनिर्भसल पीस फेडेरेसन नेपालका अध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री..
कलैया । कलैया अस्पतालले पत्रकार र स्वास्थ्यकर्मीको स्वाब सङ्कलन गरेको छ । पर्सामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण तीव्र रुपमा फैलिरहेको र दुई जना पत्रकारमा सङ्क्रमण देखिएपछि बाराको कलैया अस्पतालमा पत्रकारहरुको स्याब सङ्कलन गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ बाराको पहलमा ४२ जना पत्रकारको स्वाब सङ्कलन गरिएको..
एजेन्सी । नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले सडक निर्माण गरेपछि यो विवादलाई भारतीय मिडियाले पनि प्राथमिकता दिएका छन् । इन्डिया टुडे ग्रुपले सञ्चालन गरेको आजतकले नेपालले गल्ती गरेकाले यो मुद्दामा भारत बलियो भएको दावी गरेको छ । उसले विगतमा भएका सन्धि तथा सम्झौता नेपालसँग नभएकाले भारत बलियो भएको तर्क..
आइएमएस ग्रुपले पत्रकार महासंघलाई हस्तान्तरण गर्याे ७ हजार मास्क
शुक्रबार, बैशाख २६, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । आइएमएस ग्रुपले सिनामंगलस्थित नेपाल पत्रकार महासंघलाई ७ हजार मास्क हस्तान्तरण गरेको छ । आईएमएस ग्रुपका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सो मात्राको मास्क महासंघलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को कारण सारा विश्व..
मन्त्रालयले सोध्यो रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक कार्कीसँग प्रष्टिकरण
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेश कार्कीसँग प्रष्टिकरण सोधेको छ। सोमबार बिहान जनता समाजवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईसँग नवराज लम्सालले लिएको अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध आपत्तिजनक शब्द प्रयोग भएको भन्दै स्पष्टिकरण..